डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पेश नगर्दा के हुन्छ ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
२०७५-०७-१४ बिचार / प्रतिक्रिया
म युएस सिटिजन हुँ र मैले मेरो श्रीमती र ८ वर्षको छोरीका लागि फेमिली पेटिसन्स युएससीआईएसमा पेश गरेको थिएँ । मेरो श्रीमतीको आई–१३० पेटिसन एप्रुभ भएर आयो, तर मेरी छोरीका लागि थप सबुत प्रमाणको माग गरेको छ । सो मागमा युएससीआईएसका अनुसार म र छोरीको रगतको नाता साथै फादरको हैसियतले जिम्मेवारी लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भनेको छ । साथै, इच्छा भए डीएनए (रगतको जाँच) पनि गर्न सकिन्छ भनेको छ । मसँग अन्य कागजपत्रहरु त छ, तर डीएनए टेस्ट गर्नु पर्छ कि पर्दैन भनी अन्योलमा परेको छु । त्यसैले डीएनए टेस्ट गर्न जरुरी छ ? के यदि डीएनए टेस्ट नगरी अन्य कागजपत्र मात्र पेश गरेमा छोरीको आई–१३० पेटिसन एप्रुभ हुन सक्छ ? डीएनए टेस्ट गर्न खर्चिलो र धेरै समय लाग्ने भएकाले ज्यादै चिन्तित छु । सल्लाह दिनु भए आभारी हुने थिएँ । धन्यवाद ।
– समर, न्यूयोर्क
युएससीआईएसले शुरुमा पेश गरेको कागजपत्र प्रमाणका आधारमा निवेदनउपर निर्णय गर्न सकेन भने थप प्रमाणको माग गर्ने नियम रहेको छ । त्यस्ता प्रमाणहरु तोकिएको म्यादभित्र युएससीआईएसमा पेश गर्नुपर्ने नियम छ । यदि रिक्वेस्ट फर एभिडेन्स (आरएफई)ले माग गरेका प्रमाणहरु एकमुष्ट तोकिएको म्यादभित्र पेश गर्न नसकेमा उक्त निवेदन युएससीआईएसले अस्वीकृत गर्न सक्नेछ । त्यसैले युएससीआईएसले उठाएका प्रश्नलाई पूर्णरुपमा जबाफ दिने खालका सम्पूर्ण प्रमाणका कागजपत्रहरु एकैचोटिमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंको केसमा वस्तुस्थिति हेर्दा बच्चाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जन्मेको समयमा नभई धेरै पछि मात्र प्राप्त गरेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा युएससीआईएसले साधारण स्थितिमा अन्य डकुमेन्ट्सहरुको माग गर्ने हुन्छ । यदि अन्य प्रमाणहरु नभए डीएनए टेस्टको रिपोर्ट पनि माग गर्न सक्दछ । डीएनए टेस्ट जहिले पनि अप्सनल अर्थात् ऐच्छिक हो । यदि डीएनए टेस्ट गर्न समय र खर्चको हिसाबले धेरै झन्झटिलो भएको खण्डमा अन्य सेकेन्डरी एभिडेन्स पनि पेश गर्न सकिनेछ । जस्तै– हस्पिटल रिकर्डस्, स्कूल रिकर्डस्, चर्च वा टेम्पल रिकर्डस्, मनी ट्रान्सफर गरेको रिकर्डस्, घरमा जन्मिएका भए मिडवाइफको एफिडेभिट्स, घटीमा २ जना आफ्नो उमेर वा जेठो नजिकका साथीहरु वा नातेदारहरुको स्वर्न एफिडेभिट्स र बच्चासँग विभिन्न सामजिक, धार्मिक र व्यक्तिगत अवसरमा खिचेका तस्वीर वा फोटोग्राफहरु र अन्य कुनै प्रमाणहरु जसले बाबुछोरीको सम्बन्ध स्थापित गर्दछ, त्यस्ता कागजपत्र वा प्रमाणहरु पेश गर्नुभएमा युएससीआईएसले आई–१३० पेटिसन एप्रुभ गर्न सक्नेछ । तर, यी प्रमाणहरुका साथै डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पनि पेश गर्नुभएमा तपाईंको केस अति नै स्ट्रङ हुनेछ । तर, यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि अन्य प्रमाणहरुको अभावमा डीएनए टेस्ट मात्र पेश गरेर आई–१३० पेटिसन स्वीकृत हुने ग्यारेन्टी हुँदैन ।